१७ दिनदेखि हराईरहेका साहिद खरानीमा यस्तो अबस्थामा भेटिए , गाउँमा आएको जन्ती हेर्न जाँदा सम्पर्क विहिन बनेका साहिदलाई आखिर कस्ले यस्तो अबस्थामा पुर-यो ? – Dainiki Online
12/03/2021 12/03/2021 adminLeaveaComment on १७ दिनदेखि हराईरहेका साहिद खरानीमा यस्तो अबस्थामा भेटिए , गाउँमा आएको जन्ती हेर्न जाँदा सम्पर्क विहिन बनेका साहिदलाई आखिर कस्ले यस्तो अबस्थामा पुर-यो ?
बारा प्रहरीले एक जना बालकको श व फेला पारेको छ। जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २३ भलुहीस्थित म्यागनस फर्मास्यूटि कल्सको दक्षिण–पूर्वमा थुपारिएको छाई (धानको भुसको खरानी) मा पु रिएको अवस्थमा बालकको शव फेला परेको हो। सोही टोलका जाकिर हुसैन मिया मन्सुरीका १४ वर्षीय छोरा साहिद हुसैन मिया मन्सुरी विगत १७ दिनदेखि बे पत्ता थिए।
उनको अपहरणपछि ज्या न लि एर फालिएको हुन सक्ने परिवारजनले आ शंका गरेका छन्। बाराको परवानीपुरस्थित ज्ञान सागर बोर्डिङ स्कूलमा अध्ययनरत साहिदले रातो टिर्सट, ब्लु पैन्ट र रातो/पहेलो रंगको प्लास्टिकको चप्पल लगाएका थिए। उनको पहिचान उनको कपडाबाट भएको साहिदका काका ताहिर हुसैन मिया मन्सुरीले बताए।
बारा प्रहरीले आज बिहान साढे ८ बजे श व बरामद गरी सोही बालकको हो कि अरुको पो स्ट मार्टम र डिएनए परिक्षणबाट यकिन गर्ने बताएको छ। गत फागुन ११ गते राति ११ बजे गाउँमा आएको जन्ती हेर्न जाँदा उनी सम्पर्क विहिन बनेका थिए। परिवारजनका अनुसार पारिवारिक रिसइबीको कारण बालकको ज्या न लि एर गा डि एको हुन सक्ने अ शं का गरेका छन्। परिवारजनले दो षी पत्ता लगाई आवश्यक का र बा हीको लागि माग गरेका छन्। पहिलो पोष्ट